I-iProfit HFT MT4 EA Review - I-EA Forex Ehamba phambili | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
IkhayaiProfit HFT MT4 EAiProfit HFT MT4 EA ukubuyekeza
BEST Forex EA'S | UCHWEPHESHE abeluleki | FX amarobhothi iProfit HFT MT4 EA 2
Price: $ 129 (2 YANGEMPELA & 2 DEMO AKHAWUNTI, MAHHALA Updates & UKUSEKELWA)
Amabili ngamabili: USDCAD
Qaphela: Kunamaphakeji e-3 ahlukile we-FX Seven Pips Isazi Advisor atholakalayo manje:
Price: $ 375 / ngonyaka (I-LICENSE YE-ANNUAL, UPDATED FREE & SUPPORT)
Currency ngababili: EURUSD, EURJPY, AUDUSD, GBPUSD ne-XAUUSD
Qaphela: Kukhona amaphakheji ahlukene we-2 we-iProfit HFT MT4 Expert Advisor atholakalayo okwamanje:
- UMNYANGO WONYAKA: Ama-akhawunti we-2 REAL noma ama-DEMO, ama-Updates amahhala nokusekelwa, Amanani ajwayelekile: $ 375 / ngonyaka
- ILILENSI YOKUPHILA: Ama-akhawunti we-2 REAL noma ama-DEMO, Ukubuyekeza kwamahhala nokusekelwa, Amanani ajwayelekile: $ 780
KUBALULEKILE: I-iProfit V3.0 entsha - i-HFT (Ukuhweba Okujwayelekile)
I-iProfit HFT MT4 EA Ukubuyekezwa - Iseluleki Esihle Kakhulu Sokuhweba Okuphezulu Kwezikhathi Zonke
iProfit HFT MT4 EA lihle kakhulu Forex Expert Advisor eklanyelwe ngu I-Phibase Technologies ngokuhweba okuzenzakalelayo ku-platform ye-Metatrader 4 (MT4).
I-Phibase Technologies ungomunye wabakhiqizi abahlonishwa kakhulu abacebisi bezobuchwepheshe emphakathini wokuhweba we-Forex. Yenza ukuhweba okuphezulu kwekhwalithi okusebenzayo futhi okuzuzisa ukuthengisa abathengisi be-Forex.
iProfit HFT i-EA enikezwa yi-self-contained, self-learning I-algorithm ye-Neural Network (NN). Isu akukona ukuphuma ngaphandle kwezimakethe kodwa ukuqhubeka nokukhiqiza inzuzo encane ngenkathi kugcina ukulahlekelwa phansi.
The Forex Robot idale iqembu lezazi ukuze kuqinisekiswe ukuthi yisisombululo sokuhweba esiphelele kuwe. Nazi izibalo ezibaluleke kakhulu kulokhu iProfit HFT MT4 EA:
Ukuhweba Logic - Uhlelo lwe-Neural network oluvumelanisa namandla nezenzo zamanani zamuva kakhulu.
Ingozi: Umvuzo - Umvuzo wobungozi oqondile ngesilinganiso sokuwina kwe-60%. Ukuthola okumaphakathi ama-pips we-25 kanye nokulahleka okuphakathi kungama-27 pips.
Amabhangqa athengisiwe - Itholakala ngababili ngokuhlobanisa okuhlukile: I-EURUSD, i-EURJPY, i-AUDUSD, i-GBPUSD futhi XAUUSD
Thola okungenzeka - Izinzuzo eziphakathi ze-170 pips / ngenyanga - Ezisengozini eziphakathi, izinzuzo zenyanga zokulingana ze-3% ziye ku-5%.
Ukudonsa - Ukudonsa okuphezulu kwecebo yi-pN1000 pips (ubukhulu be-20% engozini ephakathi).
Ukuphepha kwe-Akhawunti - Uhlelo olungelona lweGridi / Martingale. Isimo sokuhweba sejometri siqinisekisa ukuphepha kwezimali.
6 Yrs Track Live - Ukusebenza okufakazelwe ngeminyaka eyisithupha ye-Myfxbook irekhodi lokuqinisekisa ukusebenza kwethrekhi.
I-12 Yrs Backtest - Ukuhlolwa kwecebo lokuphamba kwedatha yeminyaka engu-12. Imiphumela yokuqhathanisa yokuhlolwa kwe-Live vs Back yeminyaka ye-6.
iProfit HFT MT4 EA kudinga abathengi be-ECN / STP ngokuhleleka kokuhweba okuhle, ukusakazwa okuphansi kanye nokunyakaza kwe-mimin. Sincoma abadayisi bathanda IC Markets. Ukusabalalisa okujwayelekile / okuphezulu, akukho ama-akhawunti wekhomishana akuvunyelwe.
iProfit HFT MT4 EA yasungulwa ngo-i team uchwepheshe abadayisi professional abafuna ukukubona uphumelele!
Yenza ukusetshenziswa kwe iProfit HFT MT4 EA bese ziphenduka utshalomali yakho ibe GOLD!
Ukuhweba okuPhezulu okuphezulu kwabathengisi be-Retail FX
iProfit HFT u-Advisor Advisor (EA) ohlinzekwa yi-self-contained, self-learning neural Network (NN) algorithm. Isu akukona ukuphuma ngaphandle kwezimakethe kodwa ukuqhubeka nokukhiqiza inzuzo encane ngenkathi kugcina ukulahlekelwa phansi. Leli yiqhinga elilandelwa yi-HFT enkulu yokuhweba ama-algos okwenza izinkulungwane zezimakethe ngesikhathi sokunciphisa amandla okusebenzisa ama-computing aphezulu kakhulu, izindleko ezisheshayo zokuthengiselana. I-iProfit ivumelanisa uhlelo lwe-HFT lokuletha uhlelo oluwusizo nolunenzuzo lwe-akhawunti yokuhweba yokuthengisa egijima kuma-MT4s.
I-iProfit HFT EA - INeural Network Model
Ngenkathi amasu amaningi ancike ezinkomba zokungena, iProfit HFT i-powerd by a I-algorithm ye-Neural Network (NN) lokho kufakazela ukuphakama okuphezulu / okuphansi kwezinguquko ze-H1. Lokhu iProfit EA isekelwe ekuzifundeni, ngokuzivumelanisa ne-algo okuyinto enamandla kakhulu, ewusizo futhi enenzuzo yokuhweba noma yikuphi ukubili kokubili.
I-iProfit HFT MT4 EA - Isebenza Kanjani
iProfit HFT ibikezela uhla lwamanani ebha elandelayo ye-H1 ngokususelwa kokufakwa kwayo kwamanani we-OHLC emahoreni we-52 edlule. Imodeli ye-NN iguqula i-algo yayo kuze kube yilapho izinga lokuphumelela lokuqagela kwamabha ambalwa we-H1 edlule likhulu kune-70% - Ukubikezela okuphezulu / okuphansi kwenziwa kutholakale kuphela lapho kungenzeka ukuthi kube nempumelelo ephezulu.
Yini Ongayilindela Kule Meluleki Wabachwepheshe be-FX
iProfit HFT MT4 EA ama-pair pair enza ukulungiswa okuphansi / okuphakathi / okungalungile ukuqinisekisa inombolo enkulu yokuhweba okuphikisanayo kutholakala ohlelweni. Izinga lokuphumelela kwe-60% kanye nobungozi obuhle: isilinganiso somvuzo siqinisekisa ukuphumelela kwesikhashana esifushane nesikhathi eside. Abahwebi bangalindela ukuzuza ngamapips / ngenyanga ka-170. I-EA inconywa ukuba isetshenziswe nabathengi be-ECN enikeza ukusabalala okuphansi ne-DMA.
I-iProfit HFT EA - Isu Elinemininingwane Yokuhweba
iProfit HFT iyisimiso sokuhweba esenzelwe ukuthola inzuzo ezimweni eziningi zemakethe. Isu isisombululo esiphelele sabathengisi bezinsuku zabaqeqeshi abaneminyaka eminingi abanolwazi. PhiBase Technologies usebenzise lelisu njengenethiwekhi yokufunda ngokushesha ye-neural ngoba ifaka ukuguquguquka okunamandla kokuhamba kwamanani entengo kakhulu okubonwe ngaphakathi kwamahora we-4 kuya emahoreni we-52. Leli su lifaka nokwenza izinqumo ngokusekelwe kwidatha yangaphambilini ebhekwa ngabaningi njengobuciko kunalokho isayensi eqondile. Imodeli ye-iProfit NN ayiqukethe imithetho esetshenzisiwe, izinkomba noma amafomula. I-EA izama ukuhweba ukunyakaza kwentengo ejwayelekile okubonwe ngaphakathi kwe-H1 bar - Imodeli ye-NN ibikezela kuphela intengo ephezulu / ephansi yamabha we-H1 olandelayo. Ukuqagela kusekelwe ekuzifundeni kabusha kokuzifundela okunembono yokuqagela enhle kakhulu ye-70%.
Ngenkathi i-NN imodeli yingxenye ebalulekile yeqhinga, ingqikithi ye-iProfit yisimodeli sokwenza izinqumo esichaza ingqondo yomthengisi wosuku. Ngenkathi i-High / Low itholakale ibha ngayinye, ukuthenga / ukuthengisa / ukungazinaki isinqumo kusekelwe entweni yamanani kanye namathuba okuphumelela. ukuhamba okuhamba phambili okuhamba phambili, ukusekelwa / ukumelana nezokugcina izinto kusetshenziselwa ukwethula isimo samakethe samanje. Isikhathi sezinyanga ezihambayo sishintshashintsha phakathi kwe-4 kuya ku-20 ukuze sihlangabezane nemfuneko yesu. Amasu amamojula ayisisekelo achazwe embonweni olandelayo wokuqonda okungcono ukuhweba kokungena / ukuphuma.
I-iProfit HFT EA - Isitayela sokuhweba, Izilungiselelo ezinhle kakhulu nokuningi
iProfit HFT MT4 EA isebenzisa isu lokuhweba lesikhathi esifushane le-Ultra ngefreyimu yesikhathi ye-H1 (wonke umkhaza). Lokhu kungahlukaniswa njenge-scalper. Uhlelo lunesilinganiso sokuphumelela se-62% isilinganiso sokuthola usayizi: i-25 pip kanye nosayizi wokulahlekelwa okuphakathi ngu-27 pips. Sincoma ama-akhawunti wabathengi ngokusakazeka okuphansi okunokwenzeka kuwo wonke amabhangqa athengiswayo. Isu le-iProfit akukhona ukujabulisa izimakethe. Isitayela sokuhweba se-EA siqhubeka sikhiqiza izinzuzo ezincane ngenkathi sigcina ukulahleka kuphansi - ivolumu yokuhweba kancane kancane ingeza kufinyelela inzuzo. I-iProfit ihlose ukuletha inzuzo yanyanga zonke ngokungaguquki, kodwa bebelokhu belahlekelwa yinyanga (izinyanga) esikhathini esidlule futhi kufanele kulindeleke nakusasa.
I-EA HUD (imiyalezo eshadi) izokhombisa isimo samanje sentengo ukusuka endaweni yokubuka ye-EA. Isaziso sokungena kwe-Advance sizoboniswa kanye nentengo yokungena lapho izimo ze-Bullish / Bearish zikhona. Intengo yokungenayo yenziwa yasakazwa ngokuzimela ngentengo ye-trigger ebalwa ngokwesilinganiso se-Ask and Bid. Lokhu kunciphisa ukungafani kokuhweba phakathi kwama-akhawunti ngokusakazwa okuhlukile.
Noma kunjalo, i-trade trigger izokwenzeka kuphela uma intengo ithinta / iwela inani lokungena / lokuphuma. Ukuhluka komthengisi we-broker mayelana ne-pipeline ye-1 kuyoba yinto evamile futhi lokhu kungaholela ekungenikeni kwesikhathi sokungena / akukho ukufaka kwezinye izimo. I-iProfit ingumthengisi ovamile kanye nemingcele mayelana namabhizinisi e-100. Ukwahlukana kwezebhizinisi phakathi kwe-akhawunti (uma ikhona) bekuzokhishwa isikhathi esifushane.
Inqubomgomo Yokubuyiselwa: Unezinsuku ze-30 ukunquma ukuthi uyajabula yini ngemiphumela ye iProfit HFT MT4 EA.
Kukhona amaphakheji ahlukene we-2 I-Profrofit HFT MT4 Expert Expert itholakala okwamanje (i-ANNUAL LICENSE ku-$ 375 / ngonyaka, i-LIFETIME LICENSE ku-$ 780).
Vakashela i-website esemthethweni ye-iProfit HFT MT4 EA
Qala usuku: August 26, 2013
broker Live: IC Markets
Usuku lokuqalisa: Juni 11, 2019
I-IPROFIT HFT EA - INTSHA EPHAKATHI YOKUPHILA KWEMFX I-FX EXVERT VERSION I-3.0 EYISEBENZISWA NGOKUSEBENZA NGAPHAMBILI: + 1.0% UKUYA KWESIKHATHI SESIKHATHI (HLAWULA IZIMPENDULO EZIPHUMA 2013!) Othandekayo othandana nabo be-Forex, QAPHELA! I-iProfit entsha ye-PHF MT4 EA Version 3.0 - Umeluleki oPhezulu oPhezulu we-High Frequency Trading Thola ulwazi olwengeziwe namabhonasi lapha: https://www.bestforexeas.com/iprofit-hft-mt4-ea-review/ iProfit HFT MT4 EA iyinhle kakhulu ye-Forex I-Expert Advisor eyakhiwe yi-Phibase Technologies yokuhweba okuzenzakalelayo kumapulatifomu we-Metatrader 4 (MT4). I-Phibase Technologies ingomunye wabathuthukisi abahlonishwa kakhulu abacebisi bezobuchwepheshe kumphakathi wokuhweba we-Forex. Yenza ukuhweba okuphezulu kwekhwalithi okusebenzayo futhi okuzuzisa ukuthengisa abathengisi be-Forex. iProfit HFT... Funda kabanzi "
I-IPROFIT HFT EA - I-NEW VERSION 3.1 BUILD 20190727 RELASED - UPDATE INFO Umthengisi we-Forex othandekayo, UPDATE! I-iProfit HFT V3.1 Yakha i-20190727: Vuselela isixhumanisi sokuLanda kanye nokwaziswa Thola eminye imininingwane lapha: . Ithimba lokuthuthukisa i-Phibase linikeze i-bug-fix / buyekeza i-iProfit EA exazulula le nkinga yokuqinisekiswa. UPhibase uphinde futhi wasebenzisa isihlungi sokwehla kwesisekelo esenza ngcono ukusebenza ngokuhluza okuhweba ngenzalo yempumelelo ephansi. Amalungu asebenzisa i-FSP Cloner EA akadingi ukwenza lolo shintsho ngoba i-iProfit V4 izosetshenziswa kuyo... Funda kabanzi "